I-Henrik Ibsen's Famous Women's Play
Indlu yeDololi ngumdlalo we-1879 ngumNumzana waseNorway uHenrik Ibsen , oxelela ibali lomfazi onganeliseki kunye nonina. Kwakuyimpikiswano enkulu ngexesha lokukhululwa, njengoko kwaphakamisa imibuzo kunye nokugxeka malunga nokulindela komtshato, ikakhulukazi inxaxheba yabasetyhini kulindeleke ukuba badlale. U-Nora Helmer unqwenela ukugcina umyeni wakhe uTorvald ekufumaneni ukuba waqulunqa amaxwebhu omboleko, kwaye ucinga ukuba utyhilwa, uya kubingelela imbeko yakhe.
Uze ucinge ngokuzibulala ukuze amncede.
U-Nora usongelwa nguNils Krogstad, owaziyo imfihlo yakhe kwaye ufuna ukutyhila ukuba uNora akamncedi. Uza kutshitshiswa nguTorvald, kwaye ufuna uNora ukuba angenelele. Uvavanyo lwakhe aluphumelelanga, nangona kunjalo. Ucela uKristine, uthando olude olulahlekileyo lukaKrogstad, ukumnceda, kodwa uKristine unquma uTorvald kufuneka awazi inyaniso, ngenxa yokutshata komtshato wama-Helmers.
Xa inyaniso iphuma, uTorvald udumala uNora ngokusabela kwakhe ngokuzimela. Kulo xesha uNora uyazi ukuba akazange afumene ngokwenene ukuba ngubani, kodwa uphile ubomi bakhe njengomdlalo wokusebenzisa uyise wokuqala, kwaye ngoku umyeni wakhe. Ekupheleni komdlalo , uNora Helmer ushiya umyeni wakhe kunye nabantwana ukuze abe yedwa, engenako ukwenza njengenxalenye yunithi yentsapho.
Umdlalo usekelwe kwibali eliyinyani, likaLaura Kieler, umhlobo we-Ibsen oye wahamba ezininzi izinto ezifanayo uNora wenzayo.
Ibali likaKeeler lalinomdla othoba kakhulu; Umyeni wakhe wamlahla waza wazinikela ekukhulekeleni.
Nazi imibuzo embalwa malunga neHenrik Ibsen yeNdlu yeDolli yokufunda nokuxoxa:
Yintoni ebalulekileyo ngesihloko? Ngubani "idoli" i- Ibsen ebhekisela kuyo?
Ngubani na owona mfazi obalulekileyo ngokubhekiselele kuphuhliso lwezakhiwo, uNora okanye uKristine?
Chaza impendulo yakho.
Ngaba ucinga isigqibo sikaKristine sokungathinteli uKrogstad ekutyhileni inyaniso kuTorvald ukungcatsha kukaNora? Ngaba le nto isenza kakubi okanye izuze iNora?
UHenrik Ibsen ubonisa njani umlingiswa kwiNdlu yeDololi ? Ngaba uNora ungumntu onesihawu? Ngaba imbono yakho kaNora yatshintsha ukusuka ekuqaleni komdlalo ukuya kwisiphetho sayo?
Ingaba umdlalo uphela ngendlela okulindele? Ngaba ucinga ukuba oku kuphelile?
Indlu yeDololi ngokuqhelekileyo ibonwa njengomsebenzi wesifazane. Ngaba uyavumelana nalo mboniso? Kutheni okanye kutheni?
Kubaluleke kangakanani ukubeka, kokubili ngokwexesha kunye nendawo? Ingaba umdlalo ungenzeke kwenye indawo? Ingaba isigqibo sokugqibela saba nefuthe elifanayo ukuba iNdlu yeDolli yayisetyenziswe namhlanje? Kutheni okanye kutheni?
Ukwazi ukuba isalathiso sisekelwe kwinqanaba leemeko ezenzeke kumhlobo wesifazane wase-Ibsen, ngaba kukukhathaza ukuba wasebenzisa ibali likaLaura Kieler ngaphandle kokumzuzisa?
Yiyiphi i-actress onokuyenza njengoNora ukuba ufanele uqalise umgangatho weNdlu yeDolli ? Ngubani oza kudlala uTorvald? Kutheni ukhetho lomdlali kumbalulekileyo ebalulekileyo? Chaza i zakho zigqibo.
'Umkhombe': Isishwankathelo kunye nohlalutyo
Ukulinganisela okufanelekileyo kunye neshyathiso kwi-Golf Swing Uncedo 'Uguquka Kulula, Unzima Kakhulu'
I-Majors Majors: Ulawulo jikelele
Ukuqonda i-Big Bang Theory
Ukutshata Iingcebiso Ngokusekelwe kwi-Zodiac
Iiphambili ezili-10 ezibuyiselwayo zonke ixesha
Ngaba i-Autograph Yandisa Ubungakanani Bencwadi Yam Comic?
Ubani na ngakumbi ukuvotela: Abafazi okanye amadoda?
Ngo-1995 iBritish Ivulekile: U-Daly Unqoba kwi-Playoff